Nri nri | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Nri nri
Mmanụ aṅụ na perga: kedu ihe eji, esi esi nri, otu esi eme
Ihe ndi ozo bu ihe di egwu na ihe bara uru. Na mgbakwunye na mmanụ aṅụ nke mbụ, nke a na-agụnye propolis, pollen, jelii eze, wax. Enwere ike iji ihe a nile maka ọgwụgwọ na igbochi ọrịa dị iche iche. Isiokwu a ga-elekwasị anya na mmanụ aṅụ na perga: ihe ọ bụ, otú ọ dị na perga, ihe dị n'ime ihe ahụ, otu esi etinye ya na ihe a pụrụ ịgwọ site n'enyemaka nke mmanụ aṅụ na perga.
Otu esi akụ na ilekọta ugu n'ime ubi gi
Ihe ugbo a na-eme n'ubi ubi na ihe ndi ozo na-eme onwe ya ka o na-acho ma na-elezi anya n'uzo di iche iche, tinyere ala oghere. Ugu: Nkọwa nke ihe ubi n'ubi Akwukwo ndi ozo, ihe ndi ozo ma obu nkpuru nke ugu esi enweta nke ugbo di iche iche di iche iche, agba na ibu.
Nutmeg Ugu: nkọwa na foto nke ụdị kacha mma maka ịmalite
Butternut squash bụ otu n'ime ndị nnọchiteanya kachasị mma nke kachasị mma nke ezinụlọ Pumpkin. Ọ nwere anụ dị nro, nke na-esi ísì ụtọ nke ọmarịcha agba mmanụ ọcha na ihe ísì ụtọ. N'ihi nke a, ụdị nri ndị na-eri nri na-ewu ewu karịsịa n'etiti ndị na-elekọta ubi. Ị ma? Mexico bụ ebe a ga-amụ nke egusi.
Ndepụta ụdị dil nke kachasị mma na nkọwa na foto
Dill bụ ihe kachasị ewu ewu ya na akụkụ nile nke ụwa. Dill na-etolite na kọntinent niile, ma e wezụga mkpanaka. Ahịhịa anaghị adị na ya, ọ bụghị nanị n'ọhịa, kamakwa n'ụlọ, dịka ite na akpa na windowsill. Early ripening dil iche Early dil iche ụdị mesịa fọrọ nke nta ka ozugbo kere.
Green buckwheat: kalori, mejupụtara, uru na nsogbu
Anyị niile maara site na nwata ihe buckwheat bụ na anyị nwere ezi echiche nke ọka ọṅụṅụ sitere na ya. A kwenyere na nke a bụ ihe dị mma ma dị irè, mana ọ na-achọpụta na ka ọka buckwheat dịgide ogologo oge, ha na-etinye aka na ọgwụgwọ dị ọkụ dị otú a na ị nwere ike ichefu ọtụtụ ihe ndị a na-akpọ ọka a.